Qiso: Ninkii beeraleyda ahaa Oo Masaajidka u Shidi Jiray Feeynuusta -
HomeArimaha bulshadaQiso: Ninkii beeraleyda ahaa Oo Masaajidka u Shidi Jiray Feeynuusta
July 17, 2017 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Qoraaga la yiraahdo Muxammed Xasan Bin Cuqayl Muusa iyo Kitaabkiisa afka Carabiga ku qoran ee Al-Mukhtaar Al-Masuun Min Aclaami Alquruun ahna kitaab uu qisas iyo culuun farabadan ku ururiyey, ayaa waxaa ku jirta qiso aad u yaab badan oo ka dhacday Tuulo la yiraahdo Alxamrah.waxaana ay u dhacday sidan:
“Waxaa jiri jiray nin beeraley ah oo ku noolaa magaalo la yiraahdo Alxamrah, waxaana uu ahaa nin aad u Alle ka cabsi badan, sadaqaddana aad u bixiya sidoo kalana Masaajid ka dhisay degmadiisaa. Madaama oo xilliga uu ninkani jiray uu ahaa intii aan la helin Layrka ama korantada iyo guud ahaanba qalabka sida fudud wax loogu iftiinsho, waxaa uu ninkani habeen kasta masaajidkaas keeni jiray Faynuus lagu tukado iyo cashada ay isaga qoyskiisu ugu tala geleen, in haddii uu helo cid baahan oo uu ku sadaqaysto uuna siiyo, haddii kalana inta uu Masaajidka ku cuno uu salaadda ku sugo masaajidka.
Muddo ayuu ninkani dhaqankan ku dhaqmi jiray, kadib waxa dhacday abaar aad u ba’an oo baad iyo biyo la,aan badan keentay, waxaa gurey ceelashii biyaha, waxa ay abaartani wax yeello gaarsiisay beertii ninka odayga ah, maadaama oo uu gurey ceelkii beerta uu ka waraabin jiray.
Markii ay beertii oontay, ayaa odaygan iyo wiilashiisu ay go’aansadeen in ay qotaan ceel cusub bal si ay biyo uga raadiyaan. Muddo ayey ceelkan qodayeen oo hadba inyar ku darayeen iyaga oo naawilaya in haddii aanay quusan ay biyo ka heli doonaan. Nasiib darro ceelkii oo meel aad u fog maraya ayaa maalin maalmaha ka mid ah isku dumay iyada oo odaygii Alle ka cabsiga badnaa guntiisa ama halka ugu hooseysa ku jiro oo kalkiisa uu qodayey.
Innamadii ama wiilashii uu odaygu dhalay ee godka la qodayey oo bannaanka ka joogay markii uu dumay ayaa markiiba quustay, maadaama oo ay ogaayeen in dhererka xad dhaafka ah ee godkan arkayeenna sida uu isugu wada dumay. Waxa ay nafta ku qanciyeen in waxan ay qodayeenba ahaa xabaashiisii oo aanay ogeyn, jidka keliya ee u furanina uu yahay in aanay dib u soo faqin, si aanay uga calool xumaan burburka iyo goo’gaa maydkiisa. Go’aanka ay wiilasha qaateen waxa uu noqday in aanay godkaas dib u qodin ee ay halkaas ku xabaalaan ama ku aasaan.
Markii uu ceelku dumay waxa uu odaygu ku jiray god yare hoose oo dhinac uga sii bayray daloolka weyn ee godka, kaas oo ay ogaan u duween, si ay u gaaraan jiho kale oo ay biyo ka filanayeen, nasiib wanaagna loox saarnaa dusha sare ee ceelka ayaa markii uu ceelku dumayey ku soo dhacay gudaha, waxa aanu isku daboolay afka godkii hoose ee uu odaygu ku jiray.
Intii aanu muddo badan ku jirin godkii ayaa waxa uu ninkii odayga ahaa arkay cid aanu arkayn oo u keentay isla faynuuskii uu gayn jiray masaajidka iyo cunto la moodo in ay tahay tii uu masjidka geyn jiray habeen kasta. Muddo lix sano ah ayaa uu ninkan Alle ka cabsiga lagu yaqaanay godkan hoostiisa ku noolaa isaga oo si joogto ah u hela cunto iyo biyo, ilayskii faynuuskkuna aanu mar keliya ka damin.
Lix sano markii ay geeridiisa ka soo wareegtay, abaartiina sii daba-dheeraatay ayaa wiilashii oo iyagu illaawayba geeridii, xanuunkeediina ka bogsaday waxa ay damceen in ay mar kale isku dayaan ceel qodis. Sahamin badan iyo meelo kala duwan oo ay tijaabiyeen kadibna waxa ay arkeen in ceelka biyo ugu dhowi uu ahaa kii ay qodeen ee ay markaas dareemayeen in ay qoyaankii biyaha gaareen. Haddii ay taladii rog-rogeenna waxa ay go’aansadeen in ay dib u qodaan ceelkii oo aabahood inta ay ka soo saaraan xabaal caadiya u sameeyaan ceelkana intifaacsadaan.
Waa ceel hore u qodmay oo ciiddii ku noqotay ayuunbaa dib loo soo gurayaa, sidaa awgeed dhib badan kalama ay kulmin in ay gaaraan halkii uu looxu isku daboolay, markii ay qaadeenna waxa ay ugu tageenba aabahood oo nool oo weliba xaalkiisa caafimaad iyo nololeedba fiican yihiin. Sidii ayaanu ku soo baxay muddo dambana sii noolaa, iyada oo ceelkiina uu noqday mid ay biyo ka heleen oo iyagii iyo beertoodiiba waraabiyey.
Qisadani waxa ay tusaale fiican u tahay wanaagga sadaqadda oo laga yaabo in ay sabab u ahayd badbaadista odaygan, sidoo kale Alle ka cabsiga iyo salaadda ayaa iyaguna meesha ku jira.
Fadlan walaal adigoo Mahadsan Share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u aqriyaan qisadan.